'Ibali lokudlala 4' Ngaba yiRare Pstrong yeFilimu ethatha inceba kubazali - Iimuvi
'Ibali lokudlala 4' Ngaba yiRare Pstrong yeFilimu ethatha inceba kubazali
Abantwana bam bahleka ngakumbi, ngakumbi nangakumbi, kwaye ngendlela eqheleke ngakumbi Ibali lokudlala 4 ngaphezu kwayo nayiphi na imovie endakha ndayibukela kunye nabo kwindawo yemidlalo yeqonga, kwaye mhlawumbi yiyo yonke into efunwa ngumntu, ngokwe-endorsement. I-Giggles, i-guffaws, i-theatre-ephazamisa ukugqabhuka okumnandi, yonke loo nto. Ngaloo metric, ibetha Iimpawu ezimangalisayo 2 , okanye Umcuphi wePokémon uPikachu , okanye URalph Waphula i-Intanethi , okanye nayiphi na imiboniso bhanyabhanya yeLego.
Yonke imiboniso bhanyabhanya yePstrong, ibekwe kwinqanaba
Pstrong Utshintshe iHollywood, kodwa ngaba iStudiyo silahlekile?
Okwangoku, ngokwesiqhelo sokukhala kukaDaddy, ndanyikima amatyeli ambalwa (uSheriff Woody kunye nabalingane bakhe benza ukuwola okuninzi), kodwa khange anyibilike abe sisiphithiphithi, njengoko ndenze njalo Ikhokhonathi , okanye ukuntywila Ngaphandle nangaphakathi , okanye, uze ucinge ngayo, URalph Waphula i-Intanethi . Oko kukuvuma ukukhala, kwakhona, ngokunyanisekileyo. Iqhinga eliqhelekileyo lomdlalo bhanyabhanya kaPstrong- ngumdlalo ohlekisayo wabantwana kunye nentlekele ekhathazayo kubazali babo! —Ziyamangalisa kwaye ziyadinisa. Ukutshatyalaliswa Ngaphandle nangaphakathi Isiqithi seGoofball Island , eyayibonakalise inguquko kumntwana ovuyayo engenakuphepheka abe ngumntu ofikisayo onomsindo IChernobyl . Kukho, njengamaxesha onke, i-pathos yendalo Ibali lethoyi 4 : Izinto zokudlala ziswele, iithoyi zibuhlungu, iithoyi zirhoxile ekushiyekeni ngokungathandabuzekiyo njengoko abantwana babo bekhula. Kodwa uPstrong, okwexeshana, akasazami ukubetha bonke abazali bafile kwangoko.
Kwaye ke: zine iinkwenkwezi! Ukuphazamiseka kwezinto ezikhoyo! Oonyana bam, abaneminyaka esi-8 nesi-5, bahlekisa ngeForky, elona hlelo litsha ku Ibali lethoyi Iqela lemigulukudu, iprojekhti yobugcisa benkulisa (evakaliswe nguTony Hale) enomzimba nentloko eyingwamza, kwaye iingalo kunye nezandla zakhe zizicoci zombhobho, nomsebenzi wazo kukuchitha imizuzu yokuqala engama-30 kumdlalo bhanyabhanya ekhwaza esithi inkunkuma. (U-8-oneminyaka ubudala wayethanda indlela u-Forky aqhubeka esithi ngayo inkunkuma, kwaye wayeziqhelisela ukuyenza ngokwakhe xa ekhwela imoto yonke egodukayo.) Bahleka ezinye izinto ezongezelelekileyo ezenziwa nguDucky noBunny (bavakaliswe ngu Isitshixo & Peele ), owehlise indlu nge-vignette eyandisiweyo apho baphindaphindela khona ukugoba inenekazi elidala eliqhuba ivenkile ye-antique. (Ngokuzimisela, yayihlekisa.) Kwaye njengoko ibali lalifikelela kuvuthondaba lweemvakalelo- Woody ( uthixo uTom Hanks Ubuye wadibana nomlingane wakhe omdala kunye nothando lomdla, u-Bo Peep (u-Annie Potts) -abantwana bangcatsha inqanaba lotyalo-mali ngokweemvakalelo, oko kukuthi, oneminyaka eli-8 ubudala waphazamisa iholo yemidlalo kwakhona, Bazokugwilika! Ungakhe ulinge!
Ndicela uxolo kuwo wonke umntu kwindawo yokubonela. Utata, njengesiqhelo, uzama ngandlela zonke.
Utata ungene Ibali lokudlala 4 (ekhokelwa ngu-Pstrong vet uJosh Cooley) uchitha isiqingatha sesibini sebhanyabhanya esokola ukutshintsha itayara yeRV: iyathandeka kakhulu. Iithoyi ngokwazo, okwangoku, ziyaqhubeka nokubala ngokudibeneyo nokubhubha kwazo, okanye ubuncinci zilahlwe. Kukho, ngethamsanqa, akukho nto ilingana nayo imeko eyothusayo yekamva ngo-2010 Ibali lezinto zokudlala 3 , apho uWoody kunye neqela lemigulukudu badibana ngezandla kwaye bangenise ekufeni okubonakala ngathi kukutshisa inkunkuma: iTop-Three Pstrong Crying Jag mzuzu, ngokuqinisekileyo. Kodwa le ndalo iphela, enobukhazikhazi njengoko inokwenzeka, yadutyulwa ngokudinwa uyilo. (Umbono osisiseko, waziswa ngo-1995 ngokusungulwa kwe-Pstrong Ibali lethoyi , ukuba yonke into yokudlala oyiphetheyo ineempawu zayo ezicacileyo kunye neemvakalelo, kwaye ulangazelela uthando lwakho olungahlukanga kunye nengqwalaselo ngokuthe ngqo, sisihogo somculo werap wokubeka umntwana, onobulumko. Ndiyakrokrela ukuba ndineminyaka eyi-7 ubudala ukuba bendizakuyiphatha kakubi ngakumbi kunokuba indenza umntu omdala.)
Kwaye ke apha, ngaphakathi Ukanti enye enye indlela kaPstrong ukuba nangona kunjalo ikhokelela ekuqinisekiseni ngakumbi nakwintelekelelo kuninzi lwabanye baphinde baphinde bakhohlela iHollywood ehlotyeni ngo-2019, sifumana uSheriff Woody kwezona meko zakhe zimbi. Nje ukuba into yokudlala ayithandayo yomntwana wakhe wokuqala, u-Andy osele ekholeji ixesha elide, uWoody ngoku akakhathalelwanga ngumntwana wakhe omtsha, uBonnie, ombethe egumbini, apho uthuli oloyikekayo luqengqeleka. (Abazali kwindawo yam yemidlalo yeqonga babecinga ukuba uthuli oluqhuqisayo luhlekisa kakhulu.) UBonnie, eneentloni ezibuhlungu ngexesha lokuqhelaniswa nenkulisa, wenza uForky ukuba azole, kodwa imithombo yeForky ebomini kuphela ukuba neengxaki zokuzazisa ngokupheleleyo: Akenzi njalo Ndifuna ukuba yinto yokudlala. Yena ufuna ukuba yinkunkuma.
( Umkhondo , wam oneminyaka eyi-8 uyakhala, ngokuvuya. Beep boop! )
Ke, phakathi kohambo lwe-Rapcap RV, uWoody ugqiba kwelokuba aqinisekise uForky ukuba abe yinto yokudlala, ngenxa kaBonnie, nangona kuqondwa ukuba uthando lukaBonnie kunye nokuqwalaselwa kukhawuleza, njengabo bonke abantwana: Uyababukela bekhula, kwaye umntu, emva koko bahambe. Baza kwenza izinto ongasoze uzibone. Abazali kwindawo yemidlalo yeqonga khange bacinge ukuba le nxalenye iyahlekisa.
Inene, awona maxesha mahle kwithempeli likaPstrong-ukuvulwa Ukulandelelana kwemiboniso yomtshato ngo-2009 Phezulu , Ukusebenza ngokugqibeleleyo kwesihloko sokuKhumbula mna ngo-2017 yobungangamsha Ikhokhonathi , yonke ngo-2015 KUTHEKA NTONI XA IZIVAKALELO ZINEMIVUZO monstrosity Ngaphandle nangaphakathi -Thambekele ekuphindaphindeni njengeyona ibuhlungu. Abantwana baphume kwindawo yemidlalo bebonwabisile ukuba abonwabanga; abazali babo bayagxadazela njengeziqhushumbisi. Yinto eyoyikisayo ebumba-mbini, ukuze uqiniseke, kodwa ishiya utata ohluphekileyo omdala ehamba kwi-movie nganye yePstrong entsha enoloyiko: Angandichitha njani lo ?
Into endiyixabisileyo ke, malunga Ibali lokudlala 4 kukuba itsala ibuye umva kwi pathos ngokwaneleyo ukuba ingabongisi ubumnandi. Yonke into yokudlala entsha ifuna nje ukufumana umntwana onothando, ovela ku-quasi-villainous Gabby Gabby (umdiliya we-50s wokudonsa umtya onodoli ovakaliswe nguChristina Hendricks) kwi-stuntman yaseCanada eqhuba isithuthuthu uDuke Caboom (evakaliswe nguKeanu Reeves kwaye wakhathazeka yile nto akakwazi ukutsiba aye kuthi njengoko esenza kwintengiso yakhe yeTV). Yonke into yokudlala iyazi ukuba akukho mntwana uya kubathanda ngonaphakade, kwaye ewe, ngokujonga iimpembelelo zoku nokuba imizuzwana eli-10 ayinakukunceda kodwa yenze intliziyo yakho ibe buhlungu. Kodwa loo ennui intle iyabiliswa zizinto ezibuhlungu ezingapheliyo, ezinye zixhomekeke kulwazi oluqhelekileyo (Ukothuka kwam kuyandihlasela! Kukhupha uWallace Shawn, njengoRex osoloko enexesha), abanye bakhanyisela abazali abangashukumiyo abagxotha bonke aba bantwana bahlekisayo. kwindawo yemidlalo yeqonga. Singammisela uTata ulwaphulo-mthetho, ucebisa uButtercup i-Unicorn kwisantya sokulibazisa ngesicwangciso sokuya entloko, ngoko ke uya ejele!
Kodwa buyintoni ubuntwana, emva kwayo yonke loo nto, kodwa inye yokulibaziseka okukhulu-amaqhinga okucinga ngeseshoni? Ngaba emo kuwe? Le ayisiyiyo ilungelo lakho lokuthengisa, nangoku. Ibali lokudlala 4 ngokufanayo isebenza njengothumo oluhloniphekileyo kubo bobabini uWoody noHanks, kunye ne-denouement yonke into enencasa njengaleyo Abagibeli: Umdlalo wokugqibela Umnqwazi womnqwazi kubo bobabini i-Iron Man kunye noRobert Downey Jr. Oko kucinga, kunjalo, ukuba uHanks akaphinde angene kwindlwana yezwi Ibali lezinto zokudlala 5 . Kodwa ngaba iya kuba yinto eyoyikisayo, enobulumko, ukuba iyabanceda abantwana ukuba bahlale abantwana ithutyana elincinci, kwiscreen nakwicala? Kwanele, okwangoku, ukuba uPstrong ngeli xesha undiqhubile hayi kakhulu kunyango ukuya eWalmart, apho IForky ithengiswa nge- $ 16.87 . Ngokucacileyo, kufanelekile ukuba sifumane i-spork kwaye siyenze eyethu. Kodwa kukho kwelinye icala amaxabiso aphezulu kakhulu okuhlawula.
hq imodeli yeshishini le-trivia
U-pedro pascal uyamangalisa umfazi
uBenny jet rodriguez sandlot
udlala njani ubuyela umva
Uyilo lwango-2018 nba ludibanise
iimemes eziphezulu zika-2019